bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com The Sound of Magic – Gold Channel Movies
Episode2May. 06, 2022
Episode3May. 06, 2022
Episode4May. 06, 2022
Episode6May. 06, 2022
The Sound Of Magic/ 안나라수마나라 ( 2022)
ယူတို့ကိုကြီးနှစ်‌ယောက်ရဲ့ Comeback ဒရာမာလေး ၊ တမူထူးခြားတဲ့ Fantasy ဒရာမာလေးမို့လို့ အားလုံးပဲ မျှော်လင့်‌စောင့်စားနေခဲ့ကြတဲ့ The Sound of Magic ဆိုတဲ့ Series လေးကတော့ ပရိသတ်ရှေ့မှောက် ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ‌။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) ဟာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး‌နေရသူတစ်ယောက်ပါ။ အကြွေးနွံထဲနစ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖခင်နှင့် သူတို့ကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တဲ့မိခင်တို့ကြောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ညီမလေးဖြစ်သူကို သူကိုယ်တိုင်ပဲပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ဘဝကိုရုန်းကန်နေရသူလေးပါ။ သို့ပေမဲ့ Yoon A-Yi ဟာ ထက်မြက်ပြီး အတန်းရဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။
သူနဲ့အတူ ပထမနေရာကို ပြိုင်လုနေတဲ့ နောက်ထပ်ကျောင်းသားလေးကတော့ အတန်းဖော် Na Il-Deung (Hwang In-Yeop) ပါ။ ဒီနှစ်ယောက်သားဟာ အမြဲလိုလိုယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့ကြပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခံစားချက်တွေပေါက်ဖွားလာပြီး သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ စတင်ပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ စွန့်ပစ်ကစားကွင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ Yoon A-Yi တစ်ယောက် မှော်ဆရာ Lee-Eul (Ji Chang-Wook) နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရာမှ မှော်ပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ Yoon A-Yi တစ်ယောက် ဘယ်လိုထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာတွေနဲ့ ကြုံရမှာလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် အပိုင်း ၆ ပိုင်းထဲနဲ့ ရိုက်ပြထားတာဖြစ်လို့ ကိုကြီးနှစ်ယောက်ကို အတူတူကျူးရအောင် Gold Channelက အခုပဲ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။